စိတ်ကြိုက် USB charger စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board > USB အားသွင်း
PCB သည်၎င်း၏တာရှည်ခံသောကြောင့် PCB သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ နာရီပေါင်း ၇၂၀ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုနှင့်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှု၊ ထပ်မံစစ်ဆေးမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ circuit board သည်အလိုအလျောက် fuse box၊ high voltage သို့မဟုတ် short circuit automatic protection၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသောအားသွင်းစက်
1.USB charger ကို parameters တွေကို
၂ နှင့်အားသွင်းပါဝါထောက်ပံ့ရေးထုတ်ကုန်များ၏ applications များ
တစ်ခု အမိန့်များနှင့်ထောက်ခံမှု proofing
၄ ။ အရည်အသွေးအကဲဖြတ်
၃ ထုတ်ကုန်ကိုသင်မသိပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ နမူနာပြရန်အရောင်းပြခန်းသို့သွားပါ။ အတည်ပြုခြင်းနှင့်အမှာစာသည်အရည်အသွေးမှာအဆင်ပြေပါသည်။ ခြားနားမှုရှိလျှင်ဖြန့်ဝေပါ ထုတ်ကုန်နှင့်နမူနာအကြား, အရည်အသွေးပြန်လာနှင့်လဲလှယ်ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ နမူနာအပေါ်အခြေခံသည်!
၈ ။ တိုက်ဘုတ်န်ဆောင်မှုများမိတ်ဆက်
ကြိုတင်ရောင်းချမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသည်ဖောက်သည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်၊ တယ်လီဖုန်းအမှာစာများနှင့်စာတိုက်အမှာစာများကိုလက်ခံမည်။
ပြီးနောက် sale: ၁။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကအရည်အသွေးပြproblemနာဖြစ်ရင်၊ မကျေနပ်မှု။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ပြproblemနာကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါမည် အဆိုပါသဘောတူညီခဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှ။ ထုတ်ကုန်ပုံမှန်ကြောင့်အသုံးပြုမရနိုင်လျှင် 2. လူ့အချက်များရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြaနာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း, ပြီးတော့မပေးကြောင်းညွှန်ပြ သုံးစွဲသူ၏ပြproblemနာအရသုံးစွဲသူ၏အခြားဖြေရှင်းချက်များ။
Hot Tags: USB charger၊ စိတ်ကြိုက်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ